HomSuvedi — Sat, 07/21/2018 - 21:03
छन् कण्ठ नारा अझसम्म तिम्रा
ताजा अझै छन् प्रतिबद्ध तिम्रा
नङ्ग्याउँदै देश सबै छिलेछौ
औंलो दिएँथ्यौं डुँडुलो निलेछौ ।।
आकारमा देव समान देख्थ्यौें
देखेर तिम्रा स्तुति गान लेख्थ्यौं
बैरीहरुकै सँगमा मिलेछौ
खै के भयाे के भयो
HomSuvedi — Sat, 07/21/2018 - 08:45
कता जानु थियो कता पुगिएछ खै के भयो के भयो !
नपर्खने वाचा गरेर पनि उसैको बाटो रुँगिएछ खै के भयो के भयो !
अब ता वास्ता नगरौं भन्यो फेरि पनि धर छैन
बोध हुँदैछ, आफ्नै भाग्यलाई आफैं ठुँगिएछ खै के भयो के भयो !!
HomSuvedi — Thu, 07/19/2018 - 15:15
गर्मीको त्राण हो छाता छाताले पानी छेल्दछ
पानी मात्र कहाँ यस्ले हाम्रो जीवन ठेल्दछ
जसका साथ यो छाता रहेन यो बुझे भयो
त्यसको जिन्दगी व्यर्थै व्यर्थैमा अमिलो भयो ।।
HomSuvedi — Fri, 07/13/2018 - 15:01
वाणीको गहिराइबाट उहिल्यै मोती टिपेका थियौ
आफ्नो सिर्जनभित्र शब्दपथको माला खिपेका थियौ
हे रामायणका प्रबर्तक सधैं तिम्रै यहाँ सार छ
भाषा सेवक पूज्य आदिकविमा मेरो नमस्कार छ ।।
editor — Thu, 07/12/2018 - 03:38
अमेरिकामा एकताका १६ पेजको कमन सेन्स किताबले देशै हल्लाएको थियो । त्यही किताबका कारण अमेरिकीहरू बेलायतीहरूको उपनिवेशबाट सदासदाका लागि मुक्त भएका थिए । मानवको सर्वप्रिय खोजी नै मुक्ति हो । मुक्तिका लागि संसारका सबै मानिसहरू अहोरात्र लागेका छन् ।
सन्दर्भ यतिखेरको पुस्तक छ –‘जीवन एक सङ्घर्ष अनेक मोड’ । यो पुस्तक एकजना फरक क्षमताका भाइले लेख्नुभएको हो । वहाँलाई स्पानल कड इन्जुरी भएको छ । रोग मानिसको चाहना कवै होइन । रोग बाध्यता वा दुर्घटनाका कारण हुन्छन् ।
HomSuvedi — Wed, 07/11/2018 - 20:45
कलम र कपी बोकी रामको गीत गायौ
प्रभुसँग कवितामा भावनामै रमायौ
परिचित अझ हुन्छौ काव्यका दूत हेर
युग युग रहनेछौ भानु भाषा बनेर ।।
सबतिर छ दिएको भानुले योगदान
सुमधुर कवितामा रामको गीत गान
रसमय रचना वा व्यङ्ग्य लेख्थ्यौ उनेर
HomSuvedi — Thu, 07/05/2018 - 12:18
हो रैछ संसार निशा समान
आएन ज्यूँदै रहँदा नि ज्ञान ।।
भन्यौ तिमीले अघि मन्त्र यस्तो
साँच्चै बुझें आज नयाँ विधान ।।
पर्देशबाट घरको सम्झना
HomSuvedi — Fri, 06/29/2018 - 21:03
बेला यो छ असारको सिमसिमे छिट्याउँदो हो झरी
कैले बादल उग्र भै घनघटा वर्षाउँदो हो झरी
पैरोले भिर खेत बारीहरु नै हुत्याउँदै पो छ कि ?
चम्काएर मिलिक्क पापी विजुली अत्याउँदै पो छ कि ?
खेतालाहरु ब्याँसी खेत लहरे गाएर झर्दा हुनन्
रोपाहार मसक्क मस्किई हिलो छ्यापेर खेल्दा हुनन्
ब्याडे चाहिं बियाडबाट बिउका फ्याँकेर मुठ्ठाहरु
जिस्के हुन् सपना भयो घर पनि टाढा छु खै के गरुँ ?
HomSuvedi — Fri, 06/29/2018 - 14:02
नारीकाे गुणका सामु मेरो यो शिर झुक्तछ
यो रहस्य नबुझ्ने जो छ त्यो मानव चुक्तछ ।।
सृष्टि संरचना गर्ने तिमी झैं अरु को छ र
नारी हौ तिमी हे नारी तिमी हौ प्रेमको घर ।।
पिएर आँसुका धारा तिमी जीवन बाँच्तछ्यौ
भाेको बस्तै अरुलाई कनिका पनि साँच्तछ्यौ ।।
हे नारी प्रेमगङ्गा हौ सिर्जनाकी मुहान हौ
हामी लोग्नेहरुलाई सधैंकी अभिमान हौ ।।
खोस्टैमा तिमी पस्कन्छ्यौ कलाको दिव्य मोहनी
कलाको जादूले युक्त तिम्रो उच्च छ जीवनी ।।
सिन्काको भरमा तिम्रो कलाकारी उदाउँछ
चौकोमा होस् चुलाेमा होस् त्यो कला मुस्कुराउँछ ।।
यो त झन् भन्न चाहन्छु को छ तिम्रो बरोबर ?
HomSuvedi — Wed, 06/27/2018 - 20:43
धारा सुके पनि कुवा कहिल्यै सुकेन
सुख्खा परे पनि कुवा कहिल्यै सुकेन
चौ चौ गरेर किन यो मन अाज मेराे
सम्झीरन्छ घरमन्तिरको पनेराे ।।
जे ठान ठान म त बादल नै ठहर्छु
आकाश ढाक्तछु र वृष्टि भएर झर्छु
गन्तव्य माथि छ तथापि तलै झरेर
पानी भएर सब ताप र प्यास हर्छु ।।
HomSuvedi — Mon, 06/18/2018 - 11:44
चिया बारीमा नाच्न पाए हुँदो हो
त्यहाँ प्रेमले बाँच्न पाए हुँदो हो
कताबाट आयो बुढौली छिरेर
जवानी सधैं साँच्न पाए हुँदो हो ।।